2015-10-11 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
Spoken short forms - အတိုကောက်အသုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံ
8:38 PM | No Comments |
ဒီနေ့တင်ပြပေးမှာကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရာတွင် အသုံးများတဲ့ Spoken short forms ကိုနည်းနည်း တင်ပြပေးပါမယ့်။ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ အမြဲတမ်းတွေ့ရှိနိုင်သလို အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားတို့မှာဆိုရင် အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းတွေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
gonna – going to - သွားတော့မလို့။ သွားမလို့။ သွားမယ်။ (be going to - အသုံးပြုပုံအသေးစိပ်လေ့လာရန်အတွက် ဤနေရာတွင်လေ့လာပါ)
wanna – want to - သွားချင်သည်။ စားချင်သည်။
whatcha – what are you -
Whatcha doing? ခင်ဗျားဘာလုပ်နေလဲ။
dunno - don’t know - မသိဘူး။
I dunno. ငါမသိဘူး။
I’ve gotta go now. - သွားရတော့မယ်။
gimme – give me - ငါ့ကိုပေးပါ။
Gimmeacall tomorrow. - မနက်ဖန်ဖုန်းခ်ါနော်။
lemme – let me - သိပါရစေ။ ခွင့်ပြုသည်။
Lemme know what you think. မင်းစဉ်းစားတွေးတောနေတာကို သိပါရစေလား။
kinda – kind of - သနားကြင်နာတတ်သော၊ နှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းသော။
She’s kinda nice. သူမဟာ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတယ်။
အထူးသတိထားဖို့က အထက်ပါ Spoken short forms ကို အသိမိတ်ဆွေအချင်းချင်းသာအသုံးများပြီး အလုပ်အင်တာဗျူးတို့ စာစီစာကုံးအရေးသားတို့တွင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
Ref: BBC Learning English
Dunno, Gimme, Gonna, Gotta, Hafta, Kinda, Lemme, Spoken short forms, Wanna, Whatcha
Reading Series: Short Stories - The Lion And The Mouse
Reading Story ကဏ္ဍအတွက် ဒီနေ့ ပုံပြင်ဖတ်စရာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပေးပါမယ်။ မြန်မာပရိသတ်တွေ မူလတန်းကတည်းသင်လာခဲ့ရတဲ့ ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီပုံပြင်လေးဟာ မြန်မာပရိသတ်ကြားတွင်သာမက ကမ္ဘာ့အနှံ့က ပြည်သူတွေကြားတွင် ရေပန်းစားတဲ့ ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒါကတော့ Aesop (အီဇွတ်) ပုံပြင်ပါပဲ။ ပုံပြင်ရဲ့အမည်ကတော့ မြန်မာတွေသိတဲ့ 'ကျေးဇူးသိတတ်သော ကြွက်ငယ်" The Lion And The Mouse (ခြင်္သေ့နှင့် ကြွက်) ပုံပြင်ပဲဖြစ်တယ်။
lay asleep - အိပ်စက်အနားယူနေသည်။
in the forest - တောအုပ်တွင်၊ တောထဲတွင်။
great - ကြီးမားသော။
resting (rest, resting, rested, rested) - တစ်ခုခုကိုတင်ထားသော။
on his paws - သူ့၏လက်ပေါ်တွင်။
his great head resting on his paws - လက်တွင် ခေါင်းတင်လျက်။
timid - ကြောက်တတ်သော။ ရှက်တတ်သော။ တွန့်ဆုတ်တတ်သော။
unexpectedly - မမျှော်လင့်ဘဲ။
came upon him - သူ့(ခြင်္သေ့)ကိုယ်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်။
haste - မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ မြန်ဆန်မှု။
fright - ကြောက်ရွံ့ခြင်း။
to get away - ထွက်ပြေးဖို့။
ran across the Lion's nose - ခြင်္သေ့နှာခေါင်းက ဖြတ်ပြေးသည်။
nap - ခဏလေး အိပ်စက်ခြင်း၊ သည်။
roused from his nap - ခဏလေးအိပ်စက်ခြင်းမှနိုးထလာသည်။
tiny - အလွန်သေးကွေးသော။ သေးငယ်သော။ အနည်းငယ်သော။
laid his huge paw - လက်တင်လိုက်သည်။
begged - တောင်းပန်ခဲ့သည်။
Spare me! - ကျွန်တော်ကို ခွင့်လွှတ်ပါဗျ။ ကျွန်တော်ကိုမသတ်ပါနဲ့နော်။
Please let me go - ကျေးဇူးပြု၍သွားခွင့်ပြုပါ။
repay you - ပြန်ကူညီမှာပါ။
was much amused - တော်တော်ရယ်လိုက်မိတယ်။
generous - သဘောထားကြီးသော။
finally let the Mouse go - နောက်ဆုံးတော့ ကြွက်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။
Some days later - ရက်တွေကြာပြီးနောက်မှာ။
while stalking his prey - သားကောင်ကိုဖမ်းဖို့လုပ်နေစဉ်တွင်
the Lion was caught in the toils ofahunter's net - မုဆိုးထောင်ထားသော ပိုက်တွင်ငြိသည်။
Unable to free - မလွတ်နိုင်။ လွတ်မြောက်ဖို့မတတ်နိုင်။
he filled the forest with his angry roaring - ခြင်္သေ့၏ဒေါသသံတို့ဖြင့် တတောလုံးမြည်ဟီးသွားခဲ့လေသည်။
knew the voice - အသံကိုသိလိုက်သည်။
quickly - လျှင်ပြန်စွာ။
found the Lion struggling in the net - ပိုက်ကွန်ထဲတွင် ရုန်းကန်နေသော ခြင်္သေ့ကိုတွေ့လိုက်သည်။
one of the great ropes that bound him - ကြိုးချောင်းကြီးများထဲမှ ခြင်္သေ့ကြီးအား ချည်နှောင်ထားသော ကြိုးတစ်ချောင်း။
gnawed - ကိုက်ဖြတ်ခဲ့သည်။
parted - တစစီကွဲသွားခဲ့သည်။
soon - မကြာခင်။
the Lion was free - ခြင်္သေ့လွတ်သွားခဲ့လေသည်။
You laughed when I said I would repay you - ခြင်္သေ့မင်းကို ငါ့ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ပါမယ့်လို့ပြောခဲ့တုန်းက ခြင်္သေ့မင်းရယ်ခဲ့တယ်လေ။
Now you see that evenaMouse can helpaLion - အခုတော့ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကတောင်မှ ခြင်္သေ့မင်းကို ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်တွေ့မြင်လိုက်ရပြီပဲ။
A kindness is never wasted - သနားကြင်နာခြင်းဟာ ဘယ်တော့မှ အချည်းအနှီးမဖြစ်ပါဘူး။
Basic Reading, Reading, Short Story
Although, even though, despite, in spite of - အသုံးအနှုန်းများ
10:12 PM | No Comments |
although, even though, despite, in spite of - " သော်လည်း။ သော်ငြားလည်း။ သို့သော်လည်း " ဟုအဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုနည်းကတော့ လုံးဝကိုမတူပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ although နှင့် even though တို့ဟာ စကားဆက် (Conjunction) ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ အတိအကျပြောရရင်တော့ Subordinating Conjunction ဟုခေါ်တယ်။ despite နှင့် in spite of တို့ကတော့ ဝိဘတ် (preposition) ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သဒ္ဒါနည်းအရ Conjunction နဲ့ Phrase တို့ အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်း လုံးဝကိုခြားနားလှပါတယ်။
although, even though တို့ဖြင့်ရေးသားထားသော ဝါကျတို့ကို Complex Sentence (ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောဝါကျ) ဟုခေါ်တယ်။ Clause အမျိုးအစားအနေဖြင့်ဆိုရင်တော့ Adverbial Clause (ကြိယာဝိသေသနဝါကျ) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ကြိယာဝိသေသနဝါကျအမျိုးအစားတို့တွင် Adverbial Clause of Concession/ Contrast အမျိုးအစားဖြစ်၏။
despite, in spite of တို့ဖြင့်ပြောင်းလဲရေးသားလိုက်ပါ Simple Sentence (ရိုးရိုးဝါကျ) ဖြစ်သွားတယ်။ ဖော်မျူလာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Though/ Even though + Sentence (S+V+ O.....) , Sentence (S+V+O...)
Despite / In spite of + V-ing / Noun....., Sentence (S+V+O...)
Sentence (S+V+O...) though/ even though + Sentence (S+V+ O.....)
Sentence (S+V+O...) despite / in spite of + V-ing / Noun.....
Conjunction ရဲ့နောက်က Sentence အမြဲလိုက်တယ် (Conjunction+ Sentence (S+V+O..) ။ Preposition ရဲ့နောက်မှာတော့ Noun ပုဒ် သို့မဟုတ် V-ing သာလိုက်တယ် (Preposition + Noun/ V-ing...)။ although, even though, despite, in spite of တို့ကို ဝါကျရဲ့အစတွင်ရေးသားသောအခါ အလယ်တွင်ကော်မာ Comma (,) ထည့်ပေးရပြီး၊ ၄င်းတို့အား နောက်တွင်ထားက ကော်မာ Comma (,) ထည့်ရန်မလိုအပ်ပေ။
Even though he'samillionaire, he lives inavery small flat. (Complex Sentence)
>> Despite / in spite of beingamillionaire, he lives inavery small flat. (Simple Sentence)
သူသည် သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း တိုက်ခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်းမှာနေတယ်။
He lives inavery small flat even though he'samillionaire.
>> He lives inavery small flat despite / in spite of beingamillionaire.
Although / even though he's much older than the others, he won the race.
>> Despite / in spite of being much older than the others, he won the race.
သူသည် အခြားသူများထက် အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်သော်လည်း ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။
He won the race although / even though he's much older than the others.
>> He won the race despite / in spite of being much older than the others.
Even though / although it rainedalot, I enjoyed the holiday.
>> Despite / in spite of the rain, I enjoyed the holiday.
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
Even though / although they havealot of money, they're still not happy.
>> Despite / in spite of their money, they're still not happy.
သူတို့ဟာ ပိုက်ဆံတစ်ပုံကြီးရှိကြပေမယ့် (ခုထိ)မပျော်ရွှင်ကြပါဘူး။
Even though/ though it was the heavy traffic (the trafic was heavy), we got there on time.
>> Despite/ In spite of the heavy traffic, we got there on time. Or
>> In spite of / despite the traffic being heavy, we got there on time.
မီးပွိုင့်တွေ တအားပိတ်နေခဲ့ပေမယ့် ငါတို့ အချိန်ကိုက်ရောက်ခဲ့တယ်။
Though/ Even Though + S+ V+ Adj တို့ဖြင့်ရေးသားသောအခါ Despite/ In spite of +being+ Adj ပုံစံအတိုင်းရေးသားနိုင်သကဲ့သို့ Adj ကို Noun ပြောင်းပြီး Despite/ In spite of + Noun ပုံစံဖြင့်လည်း ရေးသားနိုင်သည်။ အောက်ပါ ဝါကျတို့လေ့လာကြည့်ပါ။
Adjective ကို Noun သို့ပြောင်းပုံ (အဘိဓာန်ကိုရှာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်)
rich (adj) >> richness (N)
poor (adj) >> poverty (N)
young (adj) >> youth (N)
healthy (adj) >> health (N)
clever (adj) >> cleverness (N)
Though/ Even though he is rich, he is not conceited.
>> Despite/ In spite of richness, he is not conceited. Or
>> Despite/ In spite of being rich, he is not conceited.
ချမ်းသာပေမယ့် သူက မာနမကြီးဘူး။
He is not conceited even though/ though he is rich.
>> He is not conceited despite/ in spite of richness. Or
>> He is not conceited despite/ in spite of being rich.
Though/ Even though San San isateacher, she is not conceited.
>> Despite/ In spite ofateacher, San San is not conceited. Or
>> Despite/ In spite of beingateacher, San San is not conceited.
ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် စန်းစမ်းဟာ မာနမကြီးဘူး။
She is not kind to the patients though/ even though she isanurse.
She is not kind to the patients despite/ in spite of beinganurse.
She is not kind to the patients despite/ in spite ofanurse.
သူမဟာ သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း လူနာတွေကို ကြင်နာမှုမရှိဘူး။
In spite of the fact that သို့မဟုတ် despite the fact that တို့ဖြင့်ရေးသားလိုက ၄င်းတို့နောက်က Sentence သာလိုက်ရသည် (In spite of / despite the fact that + S+V+0.....) ။ Complex Sentence ဖြစ်၏။
In spite of / despite the fact that he is much older than the others, he won the race.
>>> In spite of / despite being much older than the others, he won the race.
Advanced Level, although / even though, despite / in spite of, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
Reading Series: Story Reading
Story One (Elementary Stories for Reproduction)
L.A. Hill ရေးသားပြီး အောက်စဖို့ကထုတ်ဝေတဲ့ Elementary Stories for Reproduction စာအုပ်ကနေ ပထမဆုံးဝတ္ထုတိုလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်လေ့လာသူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။
It was two weeks before Christmas, and Mrs Smith was very busy. She boughtalot of Christmas cards to send to her friends and to her husband's friends, and put them on the
table in the living-room. Then, when her husband came home from work, she said to him,
'Here are the Christmas cards for our friends, and here are some stamps,apen and
our book of addresses. Will you please write the cards while I am cooking the dinner?'
Mr Smith did not say anything, but walked out of the living-room and went to his study. Mrs Smith was very angry with him, but did not say anything either.
'These are from last year,' he said. 'I forgot to post them.'
two weeks before Christmas - ခရစ္စမတ်မတိုင်မီ ၂ ပတ်က
very busy - အလွန်အလုပ်ရှုပ်သော
a lot of Christmas cards - ခရစ္စမတ်ကတ် အများကြီး
bought (buy, buying, bought, bought) - ဝယ်ခဲ့သည်
put them on the table - ခရစ္စမတ်ကတ် အများကို စားပွဲခုံပေါ်တွင်တင်ထားခဲ့သည်။
came home from work - အလုပ်မှအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်
stamps - တံဆိပ်ခေါင်းများ
our book of addresses - ငါတို့ရဲ့ လိပ်စာစာအုပ် (လိပ်စာတွေကိုမှတ်ထားသည့်စာအုပ်)
in the living-room - ဧည့်ခန်းတွင်
while I am cooking the dinner - ကျွန်မ ညနေစာချက်နေစဉ်တွင်
walked out of the living-room - ဧည့်ခန်းကနေထွက်သွားခဲ့တယ်
was very angry with him - သူ့ကို (သူ့ယောက်ျားကို) အလွန်စိတ်ဆိုးသည်
did not say anything - ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး
did not say anything either - (သူမ)လည်းပဲ ဘာမှမပြောခဲ့
a minute later - ၁ မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက်
came back withabox full of Christmas cards - ခရစ္စမတ်ကတ်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာတစ်လုံးနဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ်
All of them had addresses and stamps on them - တံဆိပ်ခေါင်းတွေရော လိပ်စာပါ အကုန်ပါပြီးသား။
forgot to post them - ပို့ဖို့ကိုမေ့သွားခဲ့တယ်။
When was Mrs Smith very busy ?
Why did she buy the cards ?
Where did she put them ?
What did she say to her husband ?
What did Mr Smith say ?
How did Mrs Smith feel ?
What did Mr Smith doaminute later ?
Ref: Elementary Stories for Reproduction (1) by L.A. Hill
I wish..... .... ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိ။ ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဘဲ။ သွားချင်စမ်းပါဘိ။သွားရင်ကောင်းမှာဘဲ။
"မဖြစ်ခဲ့တာကို စဉ်းစားခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတာကိုတွေးတောခြင်း" စသည်တို့ကိုရေးသားပြောဆို လိုသောအခါတွင် "I wish..... .... ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိ။ ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဘဲ။ သွားချင်စမ်းပါဘိ။သွားရင်ကောင်းမှာဘဲ။" ___ I wish+ S+ Past tense....... ___ Pattern ဖြင့်ရေးသားပြောဆိုရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် လူတစ်ယောက်က တပတ်မှာ ၅ ရက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၅ ရက်အလုပ်လုပ်ရတာကို အဲဒီလူက ငြီးငွေ့ပြီးတော့ "ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ တပတ်မှာ ၃ ရက်သာ အလုပ်လုပ်ချင်စမ်းပါဘိ" (တပတ်မှာ ၃ ရက်သာအလုပ်ဆင်းရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမှာလဲ)။
ကျွန်တော်ဟာ တပတ်မှာ ၅ ရက်အလုပ်လုပ်ရတယ်။ (ယခုလက်ရှိ အလုပ်ဆင်းနေရသည့် ရက်အရေအတွက်)
အဲဒါကို "ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ တပတ်မှာ ၃ ရက်သာ အလုပ်လုပ်ချင်စမ်းပါဘိ (တပတ်မှာ ၃ ရက်သာအလုပ်ဆင်းရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမှာလဲ)" ဟု အတွေးပုံစံဖြင့်ရေးသားပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ ___ I wish+ S+ Past tense....... ___ဖြင့်ရေးသားရတယ်။
>>I work five daysaweek.
ကျွန်တော် တပတ်မှာ ၅ ရက်အလုပ်လုပ်တယ်။
I wish I worked only three daysaweek.
ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ တပတ်သုံးရက်သာ အလုပ်လုပ်ချင်တာ။ (တစ်ပတ် ၃ ရက်သာ အလုပ်လုပ်ချင်းစမ်းပါဘိ။ တစ်ပတ်မှာ သုံးရက်သာ အလုပ်လုပ်ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမှာလဲ။)
>> You are not here.
>> I am not near you.
I wish I were near you.
အတိတ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အတွက် နောင်တရသောအခါ --
>> I worked five daysaweek last year.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကျွန်တော်ဟာ တစ်ပတ်မှာ ၅ ရက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
I wish I had worked only three daysaweek last year.
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တစ်ပတ်မှာ သုံးရက်သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
>> I did not study English last year.
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာမသင်ခဲ့ဘူး။
I wish I had studied English last year.
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အင်္ဂလိပ်စာကိုသာလေ့လာခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
____လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် မျက်မှောက်ကာလတွင် "အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူနဲ့ဝေးနေတယ်။ အိမ်နှင့်ဝေးနေတယ်" အဲဒီအလုပ်ကို မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်နေရတယ်။ ချစ်သူနဲ့မဝေးချင်ဘူး ဒါပေမယ့် ဝေးနေရတယ်။ အိမ်နဲ့မဝေးချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝေးနေရတယ်။ အဲဒီလိုအခြေမျိုးမှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလအတွက် ပေးထားတဲ့ပုံစံဖြင့်ရေးသားပြောဆိုရပါတယ်။
____အတိတ်ကာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် နောင်တရသည့်အခါတွင် "ချစ်သူနဲ့ဝေးနေခဲ့တယ်။ အလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့တယ်။ အိမ်နှင့်ဝေးနေခဲ့တယ်" အဲဒါကို ပြန်လည်၍ တမ်းတပြောဆိုသောအခါတွင် အတိတ်ကာလအတွက် ပေးထားသော ပုံစုံဖြင့်ရေးသားပြောဆိုရတယ်။
Advanced Level, English Grammar, Essential Pattern, I wish....., အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
There is .... / There are .... အသုံးအနှုန်းများ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရာတွင် There is .... / There are .... အသုံးအနှုန်းများ ဆိုတာ အလယ်တန်းအထက်တန်း ကျောင်းသူ/သားတို့ကိုသာမက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများကိုပါ ဒုက္ခကြီးကြီးပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် There is .... / There are .... ဖြင့်ရေးသားတဲ့အတခါ တော်တော်များများ မှားတတ်ကြတယ်။
ဒီနေ့တော့ There is .... / There are .... အသုံးအနှုန်းများ နဲ့ပတ်သက်၍ အလွယ်ကူဆုံးနည်းကို လေ့လာကြာရအောင်။ ကိုင်...ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ။
There is .... / There are .... ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ကြေညက်အောင် လေ့လာကျက်မှတ်ထားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
There is .... / There are .... ကို အသုံးရသည့်နေရာ
There is .... / There are .... ကို
(၁)Article (အာတီကယ် - နာမ်ညွှန်းစကားလုံး) "a, an" ပါသော ကတ္တားပုဒ်များ (a boy,abook, an apple, etc.)
(၂) Some, all, any, no စသည့် ပမာဏပြ နာမဝိသေသနပါသော ကတ္တားများ (all students, no one, etc.)
(၃) Two, three, many,afew စသည့် သင်္ချာပြနာမဝိသေသနပါသော ကတ္တားများ (three books, many apples, etc.)
(၄) Countable Plural Noun ကတ္တားများ ( books, students, girls, etc.)
(၅) Uncountable Singular Noun ကတ္တားများ (milk, sand, gold, etc.)
(၇) Some, anyone, no one, something, anything, nothing စသည့်မတိကျ၊ မသေချာသော လူ/ အရာဝတ္ထုတို့ရှိခြင်း တို့ကို There is .... / There are .... အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ရေးသားပြောဆိုရလေသည်။
-- Countable Nouns နှင့် Uncountable Nouns တို့ကို ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
-- Singular Nouns နှင့် Plural Nouns တို့ကို ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
-- Adjective အမျိုးအစားများကို ဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။
-- Articles အကြောင်းကို ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
(a) There isagirl in the class room.
(b) A girl is in the class room.
(a) There will be some girls in the class.
(b) Some girls will be in the class.
(a) There were boys in the room.
(b) Boys were in the room.
(a) There will be milk in the bottle.
(b) Milk will be in the bottle.
(a) There are 60 seconds inaminute.
(b) 60 seconds are inaminute.
(a) There are 24 hours inaday.
တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီရှိတယ်။
(b) 24 hours are inaday.
(a) There is nobody in the office.
(b) Nobody is in the office.
(a) There are seven days inaweek.
တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်ရှိတယ်။
(b) Seven days are inaweek.
အထက်ပါ ဥပမာဝါကျအသီးသီးရှိ (a) နှင့် (b) တို့တွင် (b) ဝါကျပုံစံလည်း သဒ္ဒါ (Grammar) နည်းအရ လုံးဝမှန်ကန်၏။ သို့သော်လည်း Usage မရှိ။ ထိုကြောင့် (a) ပုံစံ There is..../ There are... ဖြင့်သာရေးသား ပြောဆိုပါလေ။
There is .... / There are .... ကို အသုံးမပြုရသည့်နေရာ
(၁) the, this, that, these, those ပါသော ကတ္တားများ
(၂) I, we, you, you, he, she, it, they နာမ်စား ကတ္တားများ
(၃) my, our, your, his, her, theirs, its တို့ဖြင့်တွဲထားသော (my book, his sisters, etc.) ကတ္တားများ တို့ဖြင့် လုံးဝ (လုံးဝ) မသုံးရ။
There am I in the class room.
There is your sister in the office.
Your sister is in the office.
မှတ်ချက်။ ။ There will be.... ဟုသုံးသော်လည်း There shall be .... ဟုမသုံးရ။
There is....../ There are....../ There was..../ There were...../ There will be..... စသည်ဖြင့် မိမိရေး ပြောချင်သောကာလကိုကြည့်၍ ရေးသားပါလေ။
Advanced Level, English Grammar, Essential Pattern, There is/ are, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ, အဆင့်မြင့်
I wish..... .... ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိ။ ဖြစ်ရင်ကောင်းမှ...
Although, even though, despite, in spite of - အသံ...
Reading Series: Short Stories - The Lion And The M...
Spoken short forms - အတိုကောက်အသုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြေ...